​फाइल तैपनि आफ्नै घर्रामा « Jana Aastha News Online
​फाइल तैपनि आफ्नै घर्रामा
प्रकाशित मिति : ८ भाद्र २०७४, बिहीबार ०८:३४
सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगलाई स्थापना गर्ने ऐन अद्यावधिक गर्नू भनी सर्वोच्चले आदेश दिएबमोजिम विधेयकको मस्यौदा बनेर प्रधानमन्त्रीको हातमा पुगेको छ तर उनले त्यसलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । मस्यौदा अदालतको आदेशअनुसार नै तयार गरिएको अवस्था पनि होइन । न त अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र विदेशी दातृ निकायले इच्छा गरेअनुरूप छ ।
सर्वोच्च स्वयं पनि त्यसलाई स्वीकृत गर्ने पक्षमा जाँदैन किनकि फेरि तुरुन्तै रिट पर्छ । उता, विदेशीले पनि हामीले भनेको मानेनौ भनेर सराप्न, असन्तुष्टि पोख्न छाड्ने स्थिति छैन । यदि मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने हो भने आलोचना खेप्न तयार बन भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीले थर्काइरहेको स्थिति छ । उता, प्रचण्डलाई भने अर्कै गाह्रो, त्यही भएर देउवालाई निरन्तर दबाव दिने नै भए । विगतमा एमाले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने पक्षमा नदेखिएका कारण सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्नुपरेको हो भन्दै कार्यकर्ताको चित्त बुझाएका थिए । अहिले पनि त्यसबारे ठोस काम नगरुञ्जेल ठूलो सकस छ । प्रचण्ड र देउवा आलोपालो सत्तारुढ भएका बेला यसलाई टुंगोमा पु¥याउनै पर्नेछ ।
सबैभन्दा ठुल्ठूला मुद्दा आफ्नो टाउकोमा भएका कारण यसबाट प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने पनि प्रचण्डलाई नै हो । तैपनि, यसबारे काम अघि बढ्न सकेको छैन । सायद कानुनका सय वटा सिङ हुन्छन् भनेको यही हो, त्यसैले त सबै कुरा सुटुक्क पास गर्न गाह्रो छ । एउटा कटायो अर्कोले रोक्छ, त्यो छिरायो तेस्रो अड्किन्छ ।
भारतीय जासुसी सँस्था ‘र’ प्रमुख सामन्तको म्याद थपियो
बिरोध र रामकुमारी राती फेरि किन गए बालुवाटार ?
मध्यरातमा स्वयम्भू नजिकै दुर्घटना, मृतकको साथमा साढे २ लाख नगद र ४ लाखको चेक
प्रचण्ड निवास छिर्नेमा हिजो ऋषि धमला,आज अमरेशकुमार
साथीकी आमा बलात्कार गर्नेलाई अदालतले छाड्यो
गोली हान्ने,गर्धन छिनाल्ने र मासु पोल्ने कविता
अख्तियारले हात हालेपछि भृकुटीमण्डपको किचलो झन् बल्झियो
उपचारको निम्ति दलित महिलाको याचना
योगेश,घनश्यामबाट कहिले सिक्ने रामकुमारी कमरेड ?
मध्यरातमा स्वयम्भू नजिकै दुर्घटना, मृतकको साथमा साढे २ लाख नगद…